Ọgwụ ụwa - WRSP
AKWELKWỌ AKWIVKWỌ ỌZỌ
1964: Serge Benhayon (Benhayon) mụrụ na Uruguay.
1970: Benhayon kwagara na Sydney, Australia ya na ndị mụrụ ya ebe ọ gara ụlọ akwụkwọ wee mepee egwuregwu egwuregwu.
1990s (Oge mbu): Benhayon ya na nwunye ya Deborah na umu ha kwagara Northern Rivers nke New South Wales, Australia ebe o gara n'ihu na oru ya dika Tennis Coach.
1999: Benhayon nwere usoro nkpughe nke esoteric na-ekwusara usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ wee malite ịmalite site n'ụlọ ya na Northern Rivers. Benhayon kpọrọ nkà ihe ọmụma ya “Ọgwụ Universal.”
2002: Serge na Deborah Benhayon kewapụrụ.
2003: Benhayon nyere ndị nkuzi mbụ na ọzụzụ ọzụzụ na ụzọ ya. Na Northern New South Wales, Australia.
2004: Ulo akwukwo a na-akpọ The Arcane School gbara ndị ọka iwu si Lucis Trust aka; Benhayon kwụsịrị iji aha a.
2005: Benhayon malitere inye ulo akwukwo ugboro abụọ n’afọ n’ime Somerset, United Kingdom.
2006: E guzobere weebụsaịtị nke Universal Medicine.
2007: UniMed Publishing, Universal Medicine's raara onwe ya nye ulo oru mbipute, ka emebere.
2008: Benhayon nyere ụbọchị ise mbụ na-ebi "Retreats na Vietnam na Australia."
2010: Benhayon lụrụ Miranda bụ onye bụbu enyi ezinụlọ ahụ.
2011: Benhayon guzobere College of Universal Medicine, òtù ọrụ ebere.
2012-2013: Esther Rockett kere blọọgụ nke raara nye discrediting Universal Medicine.
2013: Natalie Benhayon, ada Serge Benhayon, weputara ngwa ngwa ya, Ihe Omume Anyị ma guzobe ụlọ ọrụ, Esoteric Women's Health.
2014: Studentsmụ akwụkwọ nke Universal Medicine bidoro websaịtị akpọrọ Eziokwu banyere Medicine Universal igbochi ebubo na-adịghị mma a na-ekwu na mgbasa ozi.
2016: Benhayon boro ya ebubo na ọ na-ekwutọ ya megide Esther Rockett.
2018 (Disemba): Southlọikpe Kasị Elu nke New South Wales hụrụ megide Serge Benhayon.
2019: A na-akpọ ọdịnaya nke weebụsaịtị Web Blog Eziokwu banyere Medicine Universal wepụrụ.
2020 (Mee): Ebe nrụọrụ weebụ Ọgwụ Universal dị ka ọ laghachitere na nyocha mbụ wee pụta na usoro nhazi.
2020: N'okpuru COVID19, Benhayon na-enye nkuzi ya na ntanetị kama ihu na ihu na nzukọ.
Serge Benhayon [Foto dị n'aka nri] mụrụ na Uruguay na 1964. Ọ kwagara na Sydney, Australia na 1970 ya na ndị mụrụ ya ebe ọ gara ụlọ akwụkwọ wee mepee egwuregwu egwuregwu. Ná mmalite 1990s, Benhayon ya na nwunye ya Deborah na ụmụ ha kwagara Northern Rivers nke New South Wales, Australia ebe ọ gara n'ihu na-arụ ọrụ dị ka onye nchịkwa Tennis.
Benhayon guzobere Universal Medicine na Northern Rivers nke New South Wales, Australia na 1999. O sitere n'ike mmụọ nsọ nke mkpughe nke na-agwa ya ihe ọmụma banyere ụzọ ọhụrụ maka ọgwụgwọ ọzọ. Benhayon na-akọwa ahụmịhe ya n'ụzọ dịka ụzọ ndị ọzọ si ekpughee mkpughe (Lee, Stark 1992). E gosipụtara aha dị ka "ndị isi ọchịchị" na "Sanat Kumara", bụ nke ọ mechara chọpụta na ọrụ nke theosophist Alice A. Bailey (1880-1949). Ọ mepụtara ma malite ịme akwụkwọ nke usoro mgbakwunye na usoro ọgwụgwọ ọzọ. Nzụlite Benhayon gosipụtara mmata na ọdịnala okpukpe dịgasị iche iche na ahụmịhe yana usoro ọgwụgwọ na usoro ndị ọzọ (Coco 2020).
N’oge ntorobịa ya, Benhayon gosipụtara ọtụtụ mmetụta okpukpe, n'agbanyeghị na ndị mụrụ ya na ndị nne na nna ya ochie enweghị okpukpe. Ọ na-echeta na nna ya, nke a mụrụ site na agbụrụ ndị Juu na ndị Katọlik Moroccan, mụrụ okpukpe dị iche iche (S. Benhayon 2017). Nwanyị agbụrụ Benhayon bụ onye Juu nke Russia. N'oge ọ na-agụ akwụkwọ, Benhayon chọsiri ike ike na agụmakwụkwọ okpukpe nke Church of England, na-agụ akwụkwọ nta banyere Oziọma ndị Kraịst ma na-aga ụka na usoro nke aka ya. N’ụlọ akwụkwọ o mere egwuregwu nke ọma n’egwuregwu ma mesịa mepee aka n’ọzụzụ egwuregwu tennis. A na - ahụkarị uto nke ọgwụ Universal (UM) site na ịkparịta ụka ọnụ, ịkparịta ụka nke ọha na eze, yana emesịa, site na mmemme ndị emepụtara ma na-aga n'ihu na-elekọta ndị ezinụlọ Benhayon na ndị mmekọ ndị ọzọ raara onwe ha nye.
Na mbu, Benhayon si n'ụlọ ya rụọ ọrụ, na-anwale usoro ọgwụgwọ ya n'etiti ndị enyi na ezinụlọ. Na ngwụcha 2000-2001, ọ kpaliri omume ya na ụlọ e goro ego na omume onye otu. O mechara guzobe UM Clinic mbụ na ụlọ ochie ochie na Goonellabah, [Foto dị n'aka nri] Northern New South Wales. Serge na nwunye mbụ Deborah kewara na 2002 n'agbanyeghị na Deborah gara n'ihu na UM. Ka ọ na-erule 2003-2004, ọ kwụsịrị ịkụzi tenis ma na-enye ndị nkuzi ọzụzụ n'ọtụtụ ọkwa na usoro ọgwụgwọ ya n'ọtụtụ ebe ọha na eze na Northern Rivers. Ọ malitekwara iduzi usoro ntụgharị uche kwa ọnwa dabere na usoro ihe omimi nke ụwa na-akwado usoro ọgwụgwọ ya (S. Benhayon 2017). A na-akpọ usoro a na-akpọ The Arcane School na nkenke na 2004.
Benhayon kpọrọ ọhụụ okpukpe ya "Wayzọ nke Ndụ" (TWL). [Foto dị n'aka nri] N'ime oge ọ malitere ikwu echiche ya nke ọma n'ihu ọha, otu enyi nyere ya nchịkọta nke Alice Bailey (Bailey 1971). N'akwụkwọ Bailey, nke Benhayon na-ekwusi ike na ọ gụchaghị ya nke ọma, ọ zutere ọhụụ ụwa nke dabara na nghọta ọhụụ ya. Ọ na-ekwusi ike na usoro ya na-agbatị ebumnuche esoteric nke ọdịnala na-enweghị atụ site na imepụta ngwa bara uru iji duzie ndị mmadụ na mgbanwe ha (S. Benhayon 2018). Na 2008, Medicine Universal gbara nke mbụ n'ime ihe ga-eme kwa ụbọchị ụbọchị ise, na Vietnam na Australia (Unimed Living 2014c). Emechara ezumike ndị a na United Kingdom.
Otutu ihe omume UM ka ndi ozo choro ka ha kee uzo UM. Ndi sonyere weputara ma weputa webusa UM na 2006. Ndi oru Volunteers guzobere UniMed Brisbane Pty Ltd, ulo ogwu nke malitere inye ndi mmadu nkwado ndi ozo na ndi ozo na 2010. Benhayon guzobere College of Universal Medicine (CoUM) na 2011 dika ugbo nhazi. site na nke ndi oru UM nwere ike inye ndi obodo oru. Benhayon meghere Halllọ Nzukọ nke Wisless Ageless, ebe bụ isi maka ịnyefe nkuzi na ọzụzụ ya, na Wollongbar, Northern New South Wales na 2016. A na-eji Halllọ Nzukọ a eme ihe maka nnọkọ ọha na eze ebe ọ na-anapụta nkuzi ya nke esoteric ma na-etinye ndị na-etinye aka na ọtụtụ mmadụ. mmemme mmepe. Mgbasawanye dị ukwuu nke TWL bu ụzọ nye na 2017 bụ Schoollọ Akwụkwọ nke Initiation (TSOI), ihe ọmụmụ na-enye ọzụzụ iji meziwanye nghọta nke ụkpụrụ esoteric na ịmara banyere ike nke eziokwu. A na-akwado nkuzi TWL site na ntọala na-eto eto nke akwụkwọ edepụtara nke dị site na weebụsaịtị UM. Aha peeji nke akwụkwọ Benhayon na-egosi na ọ bụ “Serge Benhayon and The Hierarchy” dere ha. Ndị Hierarchy ghọtara dị ka ọdịnala nke ndị mmadụ mepụtara, ndị Nna-ukwu, ndị gafere mana amamihe ha dị maka ndị dịka Benhayon n'onwe ya nwere ike ịnata ya.
Western esotericism sitere na ọrụ nke theosophist Helena P. Blavatsky (1831-1891) (Hammer 2004). Uzo nke “Uzo nke ndu” gosiputara mmekorita doro anya ya na omenaala a kari n’itinye aka ya n’olu Alice A. Bailey (1880-1849). Na atụmatụ ya sara mbara, TWL gụnyere isiokwu ndị bụ isi nke esotericism ọdịda anyanwụ dị ka Hammer (2004) si kwuo. Etskpụrụ akwụkwọ gụnyere nkwenkwe ndị na: mkpụrụ obi mmadụ sitere na isi mmalite mbụ nke ìhè ma ọ bụ ọrụ evolushọn ha ka ha rụọ ọrụ n'ịlaghachi na isi mmalite dị ọcha; ụdị nile nke ndụ na-ejikọ ma si otú ahụ mmelite nke ike nke onye ọ bụla na-atụnye ụtụ na nke ha na nke ọzọ; ụdị ike na-emetụta ihe niile dị ndụ, na; site na nghota nke mmekorita n’etiti udiri ike di iche iche di iche iche nke ndu, umu mmadu puru iru oru dozie egwu nke ubi di ike n’obi na aru ha, si otua kwalite ngbanwe nke ime mo.
"Esoteric" na-ezo aka n'amamihe a na-adịghị ahụ anya nke ahụ nke na-ebu ihe ọmụma nke njikọta na ihe niile. Benahayon kwusara na "mkpụrụ obi ọhụrụ - ìhè zuru oke" ka Kraịst webatara n'ụwa na 2000-2001 (S. Benhayon 2009: 18). Ihe omuma ohuru nke Kraist a, nke akoro dika “obibia nke ugbo abua,” neme ka ihunanya di ike n’uwa ime ka mgbanwe mgbanwe site na nmegide nmekorita nke mmadu di iche. Ndepụta nke nsogbu mmekọrịta ọha na eze gụnyere, "mmechi nwoke na nwanyị, mmegbu, ndina n'ike, pedophilia, mkpa agha, anyaukwu na ịkpọasị" (S. Benhayon 2015: 140) ka a na-akọghachi ugboro ugboro na nkwupụta. Ihe bụ isi nke ozi Benhayon bụ nkwenkwe na ndị mmadụ n'otu n'otu kwesịrị ịzụlite mmekọrịta nkwanye ùgwù, ma n'ime ahụ ha na ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na Benhayon na ndị ọzọ enweela ike isi na-akpata Wisdom Ageless ma tinye ya n'ọrụ na ndụ ha, Benhayon na-ekwu na ndị nkịtị enweghị ike ịnweta ya ngwa ngwa. Emere usoro ọgwụgwọ ya na nkuzi ihe atụ iji nyere ndị mmadụ aka ịmụrụ anya na amamihe nke mmụọ a. Ihe ndị dị mkpa nke ụwa Benahyon bụ ụzọ ọ na-esi atụgharị uche n'echiche nke okike, prana na ọgụgụ isi, nke bụ isi ihe iji ghọta ụkpụrụ nke usoro ọgwụgwọ ya na usoro mmepe onwe onye.
Dika njirimara nwoke na nwanyi nke mmegha okpukpe ohuru nke McGuire (1994) kwuru, Benhayon na-ekwusi ike na ndi mmadu no oge a di iche na ihe di nkpa ha. Ọ na-akụzi na ụmụ nwanyị na-egosipụta ihe dị nsọ, kamakwa na isi chi ahụ bụ nwanyị na nwoke, na, n'eziokwu, ọ bụghị nwoke na nwanyị. Ike dị iche iche na nke nkwado jikọtara ya na ahụ nwanyị na nke nwoke; ihe dị mkpa nke nwanyị dị jụụ na nke nwoke bụ ije. Aghọtaghị ịbụ nwanyị na ịbụ nwoke dị ka iwu na-akọwa ọrụ mmadụ mana ọ bụ dị ka agwa ike na nwanyị na oke. Benhayon na-akụzi na ụmụ nwanyị kwesịrị ịlaghachi na ike nwanyị ha dị nsọ na ụmụ nwoke ga-amụta metụtara ya. Ihe e mesiri ike bụ na ọ dị ndị mmadụ mkpa ịchọpụta ụdị onye ha bụ n'ezie site na ijizi echiche ụmụ nwoke na nke nwoke. Maka Benhayon, ọ bụ ngafe nke ike anyanwụ nke nwoke na-emetụta ụmụ mmadụ n'ụdị prana na-emerụ ahụ.
N'ebe Ọdịda Anyanwụ, prana ka a na-ejikarị eme ihe iji zoo aka ike ndụ mana na nkuzi nke Eastern, a na-eji prāṇa eme ihe n'ụzọ dịgasị iche iche nke na-atụ aka n'ọtụtụ mmegharị na ntinye nke ọnọdụ uche na uche dị iche iche n'ime ahụ (Blezer 1992). N'ịgbaso nkuzi nke nkuzi, Bailey, onye edemede ya mere ka a mata akụkụ nke usoro Benhayon, na-etinye nghọta ndị a sara mbara karị banyere prana. N'anya ya, ọ bụ ezie na prana dị mkpa maka ịdịgide ndụ, ọ nwere ike igbochi mgbanwe ike nke mmadụ. Iberibe akụ na ụba na-atụnyekwa ụtụ n'ọnọdụ ọnọdụ mmadụ. N'ime akwukwo Benhayon, "ndi mmadu ndi mmadu mebiri emebi" ma obu "ndi nwuru anwu" bu uzo nke ike ojoo nke mejuputara prana (S. Benhayon 2009: 292) nke na-abata chakras ato nke aru. N'ụzọ dị otú a, ndị mmadụ na-egbochi "nkwenkwe ụgha na-eduhie eduhie na echiche ụgha nke zoro ezo na Ahụ Okpukpe Ahụ na Ahụhụ" (S. Benhayon 2006: 16).
Dị ka Bailey si kwuo, ihe a maara dị ka "ọgụgụ isi" bụ nchịkọta nke ihe mmetụta niile sitere na ahụmịhe ndị mmadụ na ndụ ndị gara aga (Bailey 1934, 1951). N'echiche Benhayon, ihe ọha mmadụ na-akpọ "ọgụgụ isi" bụ mkpokọta nke echiche echiche, mmetụta uche, na mmekọrịta mmekọrịta nke oke oke oke nwoke nwere. Ihe omuma a bu ihe omuma nke ezughi oke site na aru na nkpuru obi. Womenmụ nwanyị abụwo ndị na-ata ahụhụ kachasị site na ịkọwapụta oke ike nke ike nwoke, nke gosipụtara na ihe omume ọdịnala nke na-akwado ma na-enwe mmekọrịta nwoke na nwanyị (S. Benhayon 2011: 518). N'ihi ya, sayensị ọdịda anyanwụ enwebeghị ihe ịga nke ọma n'ịdozi nsogbu mmekọrịta mmadụ na ahụike (S. Benhayon 2013b). Onye na-eme ihe na-achọ ịgbanwe ikike ndị a ma nweta ike mkpụrụ obi ha na-enwu ọkụ site n'ịmụta ma gosipụta mmetụta na-enweghị enyemaka na usoro echiche ma gwọọ akụkụ ahụ ahụ ebe prana na-emerụ ahụ ejidere.
Ihe omuma nke Universal Medicine na-enye nkwenye ya na-enweghi oge, nkuzi na nkuzi na usoro ogwu ndi mmadu, ma na-enye ndi oru ogwu. Ọ bụ ezie na akụkụ dị iche iche na-achịkwa usoro ihe ọmụma na azụmaahịa a, ha nwere njikọ chiri anya na omume. UM kwuru n'okpukpe, Wayzọ nke Ndụ, edeghị aha ya dịka okpukperechi n'Australia. Nzukọ a etoola ma gbasaa mmetụta ya site na mmemme azụmaahịa netwọkụ jikọtara site na isi websaịtị UM nke dị n'asụsụ ise (Dutch, French, German, Spanish or English). O nwere ozi gbasara Serge Benhayon, mmegharị ahụ na ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ ndị a na-enye. A na-akpọsa ihe omume ebe ahụ, otu na-edebanye aha ma kwụọ ụgwọ iji gaa mmemme UM site na weebụsaịtị. Ndị mmadụ n'otu n'otu na-akwọ ụgbọala ihe omume UM bụ onye guzobere ya na onye ndu ya, Serge Benhayon, ndị ezinụlọ ya na ndị raara onwe ha nye UM worldview, ndị a na-akpọkọta ha dị ka The Student Body.
Benhayon n'onwe ya na-anapụta Thezọ okwu ndu na nkuzi ọzụzụ. Benhayon bu ụzọ kọwaa nkwupụta na nkwupụta nke ụmụ akwụkwọ chepụtara iji hụ na ha na-akọwacha ihe niile ọ na-akụzi ma na-etinye ihe ọ na-akụzi n'ọrụ ma jiri ụdị ume kwesịrị ekwesị mara ya. Na ngwụcha izu ụka a na-emeghị emechi, a na-akpọsa ma jiri ọnụahịa kwuo ọnụahịa, agbanyeghị na okwu TWL anaghị akwụ ụgwọ mgbe niile. Mmadụ nwere ike họrọ ịga otu ma ọ bụ mee ihe omume abụọ ọ bụla.
Ezinaụlọ Benhayon, onye mmekọ Miranda, [Foto dị n'aka nri] na ụmụaka Simone, Michael, Curtis na Natalie na-enyekwa aka na ọrụ UM. Miranda na-achịkwa akụkụ nhazi nke ụlọ ọgwụ Goonellabah, ọzụzụ ọzụzụ na mmemme ọha na eze. Simone, onye bi na United Kingdom, na-akụzi ma na-eme usoro ọgwụgwọ esoteric na ọ bụ onye bụ isi kọntaktị maka nleta Benhayon na-aga kwa afọ na isi UM na United Kingdom. Michael na Curtis nwere asambodo nke acupuncture na ịhịa aka na ntanetị ma tinye ụkpụrụ TWL na ụdị ọgwụgwọ esoteric na omume ha. Ha na-aru oru na Goonellabah Clinic tinyere enyemaka na ngwucha izu ndi n’adighi ike ma na etinye aka n’ihe ndi ozo gbasara UM.
Natalie na-arụsi ọrụ ike na ngwụsị izu Unimed ma soro Benhayon na-ekerịta oge ahụ n'oge nnọkọ TSOI, mana ọ haziela ma duzie atụmatụ nke onwe. O guzobere Esoteric Women Health (EWH) dị ka ihe nhazi maka ekwentị ya App akpọrọ anyị cycles, teknụzụ nke na-enyere ụmụ nwanyị aka ịgbaso usoro ịhụ nsọ ha. EWH ghọrọ azụmahịa na websaịtị nke ya. Ọ na-achikota ọtụtụ "ọrụ, ihe omume na ngwaahịa ndị na-enye ohere ịlaghachi ibi n'ụzọ na-enye ụmụ nwanyị ohere ịsọpụrụ ahụ ha na ịdị jụụ pụta ụwa na-agbaso ọtụtụ nkwa na ihe ha chọrọ" (N. Benhayon 2013a). The Girl to Woman Festival (na hiatus kemgbe 2019) bụ ụzọ n'okpuru EWH nche anwụ (N. Benhayon 2019). Ndị ọkachamara ruru eru na usoro ọgwụgwọ na-arụkọ ọrụ ọnụ, yana ndị ọkachamara n'ọhịa ha, dịka ọmụmaatụ iwu ma ọ bụ agụmakwụkwọ, soro ndị Benhayons na-enye ọrụ site na EWH na Mahadum Universal Medicine.
The College of Universal Medicine na-achịkwa Kọmitii Nduzi gụnyere ndị otu na-amụrụ ihe (College of Universal Medicine 2020a). The College na-enye ma ihe na-akwụ ụgwọ ihe omume gụnyere "noo, okwu ihu ọha, online ọmụmụ, ọdịmma ụbọchị na obodo ngosi" (College of Universal Medicine 2020b). Studentsmụ akwụkwọ guzobekwara Unimed Living, nnukwu usoro mgbasa ozi na nkwukọrịta nkwukọrịta nke na-eweta akụkụ nke nkuzi UM ma tinye ha n'akụkụ niile nke ndụ. Ozi sitere na nri nri gaa ebe obibi na nchekasị maka ụmụ nwoke (Ndụ Ebighị Ebi 2014b).
Bentù Benhayon na-eche ọtụtụ ihe ịma aka ihu: ịghara ịnakwere eziokwu nke mkpughe ime mmụọ ya, ịjụ nkwupụta nke ije ahụ iji nye usoro ọgwụgwọ dabara adaba iji kwado usoro ọgwụgwọ na ebubo nke omume okpukpe.
Benhayon ghọtara onwe ya ka ọ bụrụ onye nnata nke ozi sitere n'aka Nna-ukwu dị elu na akara site na Helena P. Blavatsky, Alice A Bailey n'onwe ya. Lucis Trust, ndị na-elekọta Alice Bailey na-ajụ aro na Benhayon bụ onye na-abịa na ụfọdụ kwuru na-ebu amụma na akwụkwọ Alice Bailey (S. Benhayon 2018). A na-ebo Benhayon ebubo na ọ bụ charlatanism n'ihe banyere nkuzi ya na-enweghị atụ. A nwawokwa usoro ọgwụgwọ UM, ọkachasị na Australia ebe Southlọikpe Kasị Elu nke New South Wales na-akọ na Benhayon mere "nkwupụta ụgha" banyere usoro ọgwụgwọ ya (New South Wales Caselaw 2019). Benhayon na-ahụ maka ịhịa aka ara nke na-elekwasị anya n'ọtụtụ mgbasa ozi, ka ndị nyocha Health Health Complaints Commission na Australia na Australian Medical Registration Board nyochara. Ọ dịghị nke ndị isi a mere ihe ka ha kwubiri na usoro ịhịa aka ara nke Benhayon emeghị ka ndị ọrịa merie (Dwyer 2013). Nchịkwa Ngwá Ọrụ Na-ahụ Maka Ọgwụ, nke na-ahụ maka ọrụ nyocha na nkwenye nke ngwaahịa ọgwụgwọ na Australia, gwara UM ka ọ wepụ nkwupụta ọgwụgwọ site na nkwalite nke ahịhịa ọgwụ na ude ndị UM kwadoro maka ahụike ara.
Nchikota nke onyinye Benhayon na enye obi uto, omume ogwugwo ya ndi ozo, na nkwuputa nkwuputa site na ufodu ndi mbu emeela onodu nke UM bu ihe ndi choro dika "nzuko nzuzo. Dị ka ihe atụ, ndị juri na Supremelọikpe Kasị Elu nke New South Wales nke a kpọtụrụ aha n’elu kọwara UM dị ka “ọha mmadụ dị ize ndụ” na “òtù nzuzo nke na-emerụ mmadụ ahụ.” N'ihi mkpebi nke Courtlọikpe ahụ megide Benhayon, e jiriwo òtù nzuzo ahụ mee ihe na ikpe dịka ịgba alụkwaghịm, ihe ịma aka na mgbasa nke ala site na ebumnuche, iwepụ ndị mmadụ n'ebe ọrụ na mmebi nke mmekọrịta.
Esemokwu dịgasị iche iche nke UM gosipụtara na-emetụta isiokwu ndị ọzọ na-ahụ maka okpukpe ọhụrụ (lee Melton 2004). Ihe ndị a bụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi na-adịghị mma na Australia na mba ndị ọzọ nke UM guzobere ebe nhazi. Ọ bụ ezie na ndị na-eso ụzọ UM agbaghawo ebubo niile, na mgbasa ozi mgbasa ozi na-adịghị mma na-aga n'ihu, nzukọ ahụ na-eche nnukwu ihe ịma aka ihu n'ọchịchọ ya maka izi ezi na nnabata.
Foto # 1 Serge Benhayon.
Image # 2: Ọgwụ Universal: Wayzọ nke Ndụ.
Foto # 3: iclọọgwụ UM mbụ na ụlọ ochie ewughachiri na Goonellabah.
Image # 4: Serge na Miranda Benhayon.
Bailey, Alice A .. 1971. Chee echiche na nke a. London: cislọ Ọrụ Na-ekwusara Lucis.
Bailey, Alice A. 1934 . Akwụkwọ nkwekọrịta banyere anwansi ọcha ma ọ bụ ofzọ nke onye na-eso ụzọ. New York: Lucis.Benhayon,
Benhayon, Natalie. 2019. "Nwaanyị ruo Nwanyị Ememme." Ọgwụ Universal. Nweta site na https://www.esotericwomenshealth.com/girl-to-woman-festival na 7 October 2020.
Benhayon, Natalie. 2013. “Esoteric Ahụike Women'smụ nwanyị. ” Ọgwụ Universal. Nweta site na http://www.esotericwomenshealth.com/ na 30 September 2020.
Benhayon, Serge. 2020. "Nnọọ ka Serge Banhayon TV." Achọghị mbipụta. Nweta site na https://sergebenhayon.tv/ na 6 October 2020.
Benhayon, Serge. 2020 . "Wayzọ nke Ndụ - Nkuzi 2020." Achọghị mbipụta. Nweta site na https://study.universalmedicine.com.au/livingness/general na 6 October 2020.
Benhayon, Serge, 2000. “Usoro ọgwụgwọ.” Achọghị mbipụta. Nweta site na https://www.universalmedicine.com.au/services/healing-therapies na 7 October 2020.
Benhayon, Serge. 2015. Oge: nkwekọrịta banyere eziokwu siri ike. Mpịakọta 1.Oge, ohere na anyị niile. Goonelabah: UniMed na-ekwusara.
Benhayon, Serge. 2013. Akwụkwọ ozi mepere emepe maka mmadụ. Goonellabah: UniMed na-ekwusara.
Benhayon, Serge. 2011. Ozizi Esoteric na mkpughe. Goonellabah: Nkwupụta na-agbasaghị.
Benhayon, Serge. 2009. Sutkpụrụ dị ndụ nke ndị isi ụlọ: akwụkwọ gbasara eziokwu siri ike. Goonellabah: UniMed na-ekwusara.
Benhayon, Serge. 2006. Ọgwụ zuru ụwa ọnụ na-eweta Ọgwụgwọ Esoteric Dị Nsọ: Ọkwa 4 dị elu . Goonellabah: UniMed na-ekwusara.
Blezer, HWA 1992. "Prana: akụkụ nke tiori na ihe akaebe maka omume na mbubreyo-Brahmanical na earlt-Upanisadic echiche." Pp. 20-49 Na Omume, ala na akụkọ ihe mere eme na South Asia: edemede iji sọpụrụ J. F Heesterman, nke AW Van den Hoek dere, MS Kolf na MS Oort. Leiden, New York, Köln: EJ Brill.
Coco, Angela. 2020. "Wayzọ nke Ndụ na Ọgwụ Niile." Nova Religio 24: 55-76.
Coco, Angela. 2018. “Ajụjụ ọnụ nke 4.” Nke Angela Coco dere. Lismore, NSW: Mahadum Southern Cross.
Coco, Angela. 2018. "Ajụjụ ọnụ 4" [Benhayon, Serge]. Nke Angela Coco dere. Lismore, NSW: Mahadum Southern Cross.
Coco, Angela. 2017. Ajụjụ ọnụ 3 (Benhayon, Serge]. Nke Angela Coco dere. Lismore, NSW: Mahadum Southern Cross.
Coco, Angela. 2017. "Ihe ederede ederede" [Natalie Benhayon]. Lismore: Mahadum Southern Cross.
Coco, Angela. 2015. "Ubi edeturu." Lismore: Mahadum Southern Cross.
Mahadum nke Universal Medicine. 2020a. “Ogwe.” Mahadum nke Universal Medicine. Nweta site na https://www.coum.org/about/board/ na 7 October.2020.
Mahadum nke Universal Medicine. 2020b. "College nke Universal Medicine - A charatible alụmdi." Ọgwụ Universal. Nweta site na https://www.coum.org/ na 16 October 2020.
Dwyer, John. 2012. "Mgbe 'Agwọ Aka' Malite ịghọta." Sayensị Ọstrịa Australasia 34: 44.
Oma, Olav. 2004. Na-azọrọ ihe ọmụma: atụmatụ nke epistemology si Theosophy ruo afọ ọhụụ. Leiden na Boston: Iju.
McGuire, Meredith B. 1994. “Gbanyere mmụọ ime mmụọ na quais-okpukpe okpukpe.” Pp. 273-87 n'ime N'etiti ihe dị nsọ na nke ụwa: nyocha na echiche banyere okpukpe quasi, nke Arthur L. Greil na Thomas Robbins dere. Greenwich, CT na London: JAI Pịa.
Melton, J. Gordon. 2004. "Echiche: Nkọwapụta nke" Okpukpe Ọhụrụ '. " Nova Religio: Journal of Alternative and Religious Emergencies 8: 73-87.
Southlọikpe Kasị Elu nke New South Wales 2019. Benhayon v. Rockett (Nke 8)  NSWSC 169. Southlọikpe Kasị Elu nke New South Wales (Usoro iwu na-atụgharị uche nchoputa nke ndị juri). Nweta site na https://www.caselaw.nsw.gov.au/decision/5c772e44e4b0196eea404c09 na10 December 2020.
Ezigbo, Rodney. 1992. “Otu ndi mmadu zuru oke si agwa chi okwu: ha bu ihe mkpughe nke echiche.” Pp. 9-34 na Innovation na ọdịnala okpukpe: edemede na nkọwa nke mgbanwe okpukpe, nke Michael W. Williams, Collett Cox na Martin S. Jaffee dere. Berlin na New York: Mouton de Gruyter.
Mmụta nke Universal Medicine. 2014a. "Universal Medicine." Ndụ Ebighị Ebi. Nweta site na https://www.unimedliving.com/serge-benhayon/uni-med/universal-medicine.html na 23 October 2020.
Mmụta nke Universal Medicine. 2014b. "The webcasting nke Universal Medicine n'ihu." Ndụ Ebighị Ebi. Nweta site na https://www.unimedliving.com/serge-benhayon/uni-med/worldwide-webcast/the-webcasting-of-universal-medicine-presentations.html na 23 Ọktoba 2020.
Ndụ Ebighị Ebi. 2014a. "Banyere Serge Benhayon." UniMed Ibi. Nweta site na https://www.unimedliving.com/serge-benhayon/who-is-serge/about-serge-benhayon.html na 31 July 2020.
Ndụ Ebighị Ebi. 2014b. “Ndụ Ebighị Ebi.” Achọghị mbipụta. Nweta site na https://www.unimedliving.com/ na 16 Ocotber 2020.
Ndụ Ebighị Ebi. 2014c. "UniMed mgbaba." Ndụ Ebighị Ebi. Nweta site na https://www.unimedliving.com/serge-benhayon/uni-med/experiencing-universal-medicine/unimed-retreat.html na 5 October 2020.